Gbasara Anyị - Yongguang Line Equipment Co., Ltd.
ANYANWU HEBEI Yongguang
HEBEI YONGGUANG LINE EGO EGO CO., LTD. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu ọkachamara na mmepụta, R&D na ahịa. Ọnọdụ nke Yongguang dị na "Isi Obodo nke Eletriki" a ma ama na China-Yongnian, n'okporo ụzọ 107 National, ọdụ ụgbọ elu Handan na ọdụ ụgbọ okporo ígwè.
Factorylọ ọrụ ahụ nwere otu ọrụ aka dị ike, aka ọrụ dị elu, akụrụngwa nyocha zuru ezu.
Ngwaahịa anyị agafeela ule nke nyocha nke CECP Power Fitting Test Lab. Lọ ọrụ ọkụ eletrik- ụlọ nyocha elele elele elele elele na ụlọ nyocha Xi'an HV. 'Zọ dị mma anyị si arụ ọrụ na arụmọrụ dị mma anyị enwetarala aha ọma site na ahịa ụlọ na mba ofesi. Na mgbakwunye, anyị agafela asambodo CE, usoro ISO 9001, nke akụkụ nke ngwaahịa ruo ụfọdụ ọkwa mba Europe na America mepere emepe.
E bugara ngwaahịa anyị na Eshia, Oceania, North America, South America Middle East, Africa wdg.
Site na njikwa ụlọ ọrụ ọkọlọtọ, usoro ọrụ mgbanwe dị mma na ọrụ azụmaahịa dị mma, ihe ọhụrụ na-aga n'ihu, na-eme ka ụlọ ọrụ anyị bụrụ otu n'ime ngwa ahịa kachasị nwee ike na ntanetị. Companylọ ọrụ ahụ jigidere ụkpụrụ nke "ịdị mma bụ ndụ, aha ọma bụ ntọala", na-enye ndị ahịa ngwaahịa dị elu na ọrụ na-enye afọ ojuju.
Anyi na anabata nnabata ndi enyi anyi si n’uwa nile bia soro anyi kparita uka ma soro anyi kwalite mmepe ike.